ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေဆွီဒင်နိုင်ငံမှ startup အကြံပြုချက်များ - ကို Justin Phelps အင်တာဗျူး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ဆွီဒင်မှဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေ startup စိတ်ကူးများ
Justin Phelps နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ပုံရိပ်တွေ: Justin Phelps
ငါ STHLM TECH ပွဲတော်တွင်မှာကို Justin Phelps တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး - စတော့ဟုမ်းအတွက်ဘယ်မှာ start-ups, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, သတင်းထောက်များနှင့်ဒီဇိုင်နာများဖြစ်ရပ်တစ်ခုတပြင်လုံးကို start-up ဂေဟစနစ်တွေ့ဆုံရန်လာနိုင်ပါတယ်။ ငါစီးကရက်ချိုးဘို့အကြှနျုပျ၏အဆှခေငျပှ Rami နောက်တော်သို့လိုက်သကဲ့သို့ငါတို့နေတဲ့စကားပြောဆိုမှုစတင်ခဲ့သည်။ Justin သူနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုပြောသည်နဲ့ကျွန်မအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ရက်ချိန်းနဲ့ကျွန်မ (ဟုတ်ပါတယ်, တကမြေအောက်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်) ကို Joors '' ရုံးဆင်းလှေကားတက်တဦးတည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်းဦးနေ့ရက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျနော်တို့အလုပ်ကိုမှာထွက်ကိုမီးရှို့နှင့်သင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါင်းဤလောက၏အဘို့ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာ, ဒီနေ့ခေတ်ဟာ 90s အတွက်စတင်-ups အကြောင်းပြောဆိုရန်ထိုင်နှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုများ၏သင်ရိုးထဲမှာ Justin မီးလောက Man ရှေ့ဆောင်များနှင့် Borderlands တစ်ခုစည်းရုံးရေးမှူး (အ Nordic မီးရှို့ခံရသောလူသားတစ်ဦးဗားရှင်း) ၏တဦးတည်းကြောင်းဖွင့်လာ၏။
Justin hallo! ဒီတော့ Joors အကြောင်းကိုငါ့ကိုပြောပြပါ။
Joors သူတို့ Telia နှင့် Ericsson ကအလုပ်လုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြီးနောက်သူ Carl Aspenberg နှင့် Tomas Olsson နေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်ကျော်စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအင်တာနက်ကိုအခမဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သောဤစိတ်ကူးရှိခဲ့ခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ဆွီဒင်၌ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအခမဲ့အင်တာနက်နှင့်အတူအပြည့်အဝ spectrum ကိုဖုန်းကကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်တကယ့်အထဲကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဆွီဒင်ကလူကြော်ငြာမှတဆင့်ထိုင်ချင်ကြဘူး - အဆိုပါကုမ္ပဏီအလုံအလောက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲမရခဲ့ပေ။ ဒါကြောင့်သူတို့က 2014 ထဲမှာပိတ်ပစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်နေ။ အင်တာနက်ကသင်၏ဝင်ငွေ 5-10% ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာထွန်းသစ်စစျေးကွက်တွေမှာ, စိတ်ကူးဒီလိုမျိုးအလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လာသည်။ နှင့်မျှမတို့အခမဲ့ Wi-Fi ကိုရှိနေပါသည်။ တည်ထောင်သူဒီ model သူတို့အားစျေးကွက်ကယ့်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်လို့ထွက်နေသေးတယ်။ Telia နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့အင်တာနက်နှင့်အတူချွတ်စတင်ဘယ်မှာနီပေါသို့ရတယ်။ လူတွေကလည်းကအလွန်လက်ခံခဲ့ကြသည်။
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, သင်အခမဲ့အင်တာနက်ရရှိရန်အလို့ငှာဒေါင်းလုတ်လုပ် app တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သနည်း
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းစနစ်ကသို့နက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစည်းသောနည်းပညာကြောင့်ကျနော်တို့ကဖုန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦး app ကို download နှငျ့သငျသငျသညျကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ဘို့ကရက်ဒစ်ရပြီးတော့သင်ကအင်တာနက်သည်အကြွေးကိုသုံးနိုင်သည်စသည်တို့ကို Facebook, Twitter ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့လည်းငါတို့လူတိုင်းအဘို့တကယ်အသုံးဝင်ထင်သောဆိုက်များပဲလက်တဆုပ်စာအခမဲ့အင်တာနက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှဝင်ရောက်ခွင့်, Non-အမြတ်အစွန်း, အစိုးရအရင်းအမြစ်များ, ဝီကီပီးဒီးယား, ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦး CSR ရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်း။
ဒီတော့ Joors 2015 အတွက်နီပေါစတင်? ဘယ်လိုသွားသလဲ?
အောင်မြင်စွာပစ်လွှတ်နှင့် beta ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်သူတို့ဝယ်ယူတယ်နှင့်အသစ်ပိုင်ရှင်တွေ program ကိုပိတ်ပစ်။ ဤအဂန္ start-up ဝဒေနာတစျခု။ ယခုမူကားဘိုလီးဗီးယား၌အော်ပရေတာကိုတိုက်ရိုက်သွားကြသည်ကိုသူတို့ကအလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်ခံရဖို့ရှာဖွေနေကြသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့ NGO အဖွဲ့အလုပ်အတွက်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာနှင့်မည်သို့ကမ္ဘာကြီးကိုကူညီပေးဖို့နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ပဲငွေဝင်ကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကိုရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့ရှင်းလင်းစွာစီးပွားဖြစ်အလုပ်ကနေလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာခွဲခြားရန်စတင်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်သင်တန်း၏, ငွေရှာဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤအယူအဆကျွန်တော်ကိုလိုက်ချင်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့အချီအဘို့ဤမျှလောက်အသုံးဝင်သည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအခမဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးအရင်းအမြစ်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရောက်စေဖို့ဒေသခံဖုန်းကိုကုမ္ပဏီများကဒေသခံအစိုးရများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်မယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအစပျိုးခြင်းဖြင့်ကမကထပြုပါလိမ့်မည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်အာဖရိကမှာလိုပဲကျွန်တော်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအတွက်လာနှင့်ဒေသခံအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. သောအခါ, သူတို့ကလူမှုရေးကောင်းသောအချို့မျိုးလုပ်ဖို့ကတိပေးဖို့ရှိသည်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ ထိုကျနော်တို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ရှာဖွေနေဖြစ်ကြောင်းစပွန်ဆာများ၏ကြင်နာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကြော်ငြာစပွန်ဆာဘက်လုံးဝပြုလုပ်မယ့်အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်များသည်, ဒီစစ်ဆင်ရေးမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကို Justin ကော? သင့်ရဲ့ခရီးကဘာလဲ? ဘယ်လိုသင်ဒီမှာရလာတာလဲ
ငါ 90s အတွက်ဆန်ဖရန်စစ္စကို start-up မြင်ကွင်းတစ်ခု၌ရှိ၏နှင့် 5-6 start-ups မှတဆင့်ခဲ့ကြပြီ။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီစတင်ခဲ့သည်။ ငါကြင်နာ၏အသက်ရှင်-ups start မှုတ်။ ငါ rollercoaster စီးကြိုက်တယ် - သငျလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းစားနပ်ရိက္ခာများအတွက်ပိုက်ဆံရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ပြီးနောက်ဘီလျံနာတစ်ပတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မယ်လို့လျှင်သင်သိတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးက start-up, ထိုနောက်ငါတစ်ပတ်ကို 50-60 နာရီအလုပ်လုပ်တစ်နှစ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ထိုအခါနောက်ဆုံးလအနည်းငယ်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံမှတဆင့်မီးလောင်သောခံခဲ့ရသည်။ ငါဒါငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ခံစားခဲ့ရထွက်ကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ ငါထင် - ငါဆွီဒင်မှရွှေ့ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းစွာမျှတတဲ့ဘဝကိုရှိသည်သွားပါ၏!
နိုင်ငံရေးအရငါ US မှာလက်ဝဲမှမြှောင်ခဲ့ပါတယ်နှင့် SF လည်း America မှာအများဆုံး left မြို့ဖြစ်၏။ ငါကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းအစိမ်းရောင်ပါတီများအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဆွီဒင်အချို့မိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်းစားဆွီဒင်ကြီးနဲ့ကျွန်မလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုခဲ့သည်။ မျှမျှတတနဲ့စိတ်အေးလက်အေးတစ်ခုခုအစားရဲ့ start-up, ကမ္ဘာ၏ရိုင်း rollercoaster ။ ဒါနဲ့ဆွီဒင်သို့ရောက် လာ. နှင့်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်နှစ်နောက်မှငါရေတွင်း-မျှမျှတတအသက်တာ၏ပျင်းတယ်နောက်တဖန်စတင်-ups အဘို့အကြည့်ဖို့စတင် Joors မှရတယ်။
အဘယ်အရာကို Joors ရန်သင့်အားဆွဲဆောင်?
စီးပွားဖြစ်နှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအလားအလာနှစ်ဦးစလုံး Joors မှငါ့ကိုမဆွဲဆောင်ကြောင်းကြီးမားဒါခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူကခရီးသွားနဲ့စွန့်စားမှုအများကြီးကတိပေးတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာ၏စိတ်ကူးဖြစ်ပျက်နေသည်နှင့်နည်းပညာကိုတင်ဆက်ဖို့အများဆုံးသက်ရောက်မှုနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျဒီမှာ rollercoaster စီးခံစားရပါသလား?
ဒါဟာဆဲ rollercoaster ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အဖြစ်ပြင်းထန်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာနေဆဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီက start-ups ၏အလှအပနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် - သင်လာရန်သွားအရာကိုသိဘူး။ သင်ကကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ pigeonholed နှင့်ဘယ်တော့မှပြင်ပကမ္ဘာကိုတွေ့မြင်ရကြသည်မဟုတ်။ တစ်ခုခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖွအမြဲရှိပါသည်။
ဒါဟာန်ဆောင်မှုကစားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်း 2000 အတွက် hosting ဂိမ်းလုပ်နေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအများပြည်သူသူတို့ရဲ့ဂိမ်းကိုဆောင် ခဲ့. ကူညီရန်အဓိကဂိမ်းအိမ်များနှင့်အတူပူးပေါင်း။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂိမ်း hosting အတွက်, ဖြန့်ဖြူး, polishing, အဆောက်အဦ interfaces, ကို web interface တွေကိုပြုလေ၏။ အများအားဖြင့်ကပူးပေါင်းဂိမ်းတွေအတွက်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ငှားရမ်းထားသောဆာဗာပေးခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမှန်တကယ်ခက်ခဲ core ကိုပရိုဂရမ်မာခဲ့, ငါ့မိတ်ဆွေတစ် Jesper ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤသည် 2002 အတွက်လေယာဉ်ပျက်ကျပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Jesper ဂိမ်းသို့တကယ်ကြီးနဲ့ကျွန်မအစွန်းစူပါကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုသွေးထွက်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအယူအဆကျနော်တို့စူပါကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဂိမ်း service provider ကဖြစ်သွားခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစူပါ buzz စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်စီးပွားရေးကို၏စကေးအကြီးဖြစ်ပါသည် - သင်ကဒီထက်စနစ်များကိုပိုမိုဂိမ်းထားပိုကောင်းအရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကတက်ဆောကျနဲ့ဒီရုံးထက်သေးငယ်တစ်ဦးတိုက်ခန်းအတွက်ပဲငါနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့စတင်ကြောင့်ထိုသို့ပြုပါဆုံးပြင်းထန်သောကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စုံတွဲတစ်တွဲတွင်ပိုမိုယောက်ျားတွေယူဆောင်ကျနော်တို့ငတ်ခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းမှာကျနော်တို့4နာရီတစ်ရက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အိမျတျော၌ 20 ယောက်ျားတွေခဲ့ကြသည်။
သင်ကဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပျခဲ့သလဲ အဘယ် afterwords ဖွစျခဲ့သလဲ
ငါ2နှစ်ပေါင်းကြောင့်အမှုကိုပြု၏။ ထိုအခါအကြှနျုပျသကုမ္ပဏီ၌ငါ့ရှယ်ယာရောင်းချခဲ့သည်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာအတူတကွကြောင်းနီးစပ်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူမျိုး၏ပြင်းထန်မှုစိတ်ကူးနိုငျပါသညျ! Jesper အနည်းငယ်ပိုပြီးနှစ်ပေါင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူဆက်လက်ငါသည်ငါ့ရှယ်ယာကိုရောင်းခြင်းထက်အများကြီးပိုငွေကရောင်းချခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါချိုးယူခဲ့ရတယ်။ ငါပယ် သွား. နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ကာရစ်ဘီယံပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုချစ်လိမ့်မယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ခုနှစ်, Joors ပြီးနောက်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ငါ startup စိတ်ကူးများများစာရင်းကိုရှိသည်နှင့်ငါတကယ်အရမ်းအခွက်တဆယ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောထောက်ခံ Eco-system ကိုလည်းမရှိသောကွောငျ့ဆွီဒင်ကအံ့သြဖွယ်ရာအရပျကြောင်းထင်ပါတယ်။
သငျသညျအလုံအလောက်အားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုယုံကြည်လျှင်သင်ကလူကနေအဘို့အခွင့်ပြုချက်ရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ကအကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိမရှိစကားကိုနားထောငျဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါကအကောင်းဆုံးစိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူးပင်လျှင်ဖြစ်ပျက်ကိုလုပ်မယ့်ကြောင်းစိတ်အားထက်သန်မှုလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မအတွေးအခေါ်များအရေးကြီးလှသည်ထင်ပေမယ့်ဇွဲ, ဇွဲ, သင်တည်ဆောက်သောအဖွဲ့သည်, သင်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆောင်ကြဉ်းသောအကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းကလုပ်နေတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ခက်ခဲသည်။ သင်နှင့်အတူအချို့သောနောက်ခံရှိသည်သောလူတို့နှင့်အတူလုပ်ရုံတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူအိပ်ရာသို့ခုန်ဘူး! တစ်အများကြီးပိုကောင်းလုပ်ငန်းရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့အကြီးအတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှိပါသည်: "တစ်ဦးက start-up, အဘို့အသငျသညျမိတ်ဖက်ထုတ်ယူခြင်းတစ်စုံတစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့ဆင်တူသည် - သင်မယ့်သူစိမ်းလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ " သင်သို့ရတဲ့နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်, သူတို့ရဲ့နောက်ခံသိသောကြောင့်, သငျသညျ အတူတူအရှိဆုံးပြင်းထန်သောအတွေ့အကြုံများရှိသည်သွားကြသည်! တဖန်သင်တို့ကဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ရှိသည်!
ငါသူတို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေကြသည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲတက်ရိုက်နှက်ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးလည်းမကြာမီအရှုံးမပေးထင်ပါတယ်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုနှစ်နှစ်မျှော်လင့်ထား။ အချို့လူများကသုံးလအတွင်းကဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်သူတို့အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်။ ရုံဆက်လက်အသက်ရှင်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသက်ရှူ! တကယ်အောင်မြင်မှုရရန်သင်ကအားဖြင့်စားသုံးရန်လိုအပ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း startup, Ekaterina Larsson, Justin Phelps, startup, startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, startup ကုမ္ပဏီ, အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ | 17-01-2017 | rating:5/ 30